Amayeza okubulala iintsholongwane, amachiza athomalalisa ukudumba, kunye namachiza okulwa neentsholongwane kufuneka aqale aqale, kwaye iziphumo zokusetyenziswa gwenxa ziya kuba mbi kakhulu! -Iindaba zezoShishino-NINGBO FEIYUE TRADING CO.LTD
Iimveliso zamachiza ezigqityiweyo
I-NINGBO FEIYUE TRADING CO.LTD
I-Antibiotic, iziyobisi ezichasayo, kunye neziyobisi zokulwa neentsholongwane kufuneka zahlulwe kuqala, kwaye iziphumo zokusebenzisa gwenxa ziya kuba mbi kakhulu!
Ixesha: 2020-07-27 Indawo: 56
DrugsIziyobisi ezichasayo: ibhekisa kwiziyobisi ezinokuthintela okanye ukubulala iintsholongwane kwaye zisetyenziselwa ukuthintela nokunyanga usulelo lwebacteria. Amachiza okulwa ne-antibacterial aquka iziyobisi ezenziwayo ze-antibacterial kunye ne-antibiotics.
②Antibiotic: ibhekisa kudidi lwezinto eziveliswa ziibhaktiriya, ifungi okanye ezinye iintsholongwane ezinefuthe lokubulala okanye ukuthintela iintsholongwane ngexesha lomsebenzi. Ukongeza kwi-antibacterial, ikwadlala indima kwi-anti-tumor, anti-infection, kunye nonyango lwezifo zentliziyo.
Drugs Amachiza alwa nokudumba: iziyobisi ezingachaphazeli kuphela indlela yokuphendula komzimba, kodwa zikwanazo neziphumo zokulwa nokudumba zibizwa ngokuba ziziyobisi ezichasayo, oko kukuthi, amachiza alwa nokudumba. Kwizonyango, zihlala zahlulwe zangamacandelo amabini. Elinye liziyobisi ezichasayo ezichasayo, zinto ezo sihlala sizibiza ngokuba zihormone, ezinje ngecortisone, recombinant cortisone, dexamethasone, prednisone acetate, njl .; enye ayisiyoSteroid iziyobisi ezichasayo, oko kukuthi, ii-analgesics ezichasayo, ezinje nge-ibuprofen, aspirin, voltarin, paracetamol njalo njalo.
Iintsholongwane ziyinkqubo yezifo. Yimpendulo yokhuselo eyenzekayo xa izicwili zenzakele. Nangona kunjalo, xa impendulo ishukunyiswa kakhulu, iya kubangela ukuba wenzakale umzimba, ngaloo ndlela yonyuse ukusweleka kwaye ikwazi ukuzixhasa. , Kwaye oku kuyingozi emzimbeni, kuyafuneka ukuba uthathe unyango olunxamnye nokuvuvukala. Izinto ezosulelayo nezingosuleliyo zinokubangela ukungavisisani, ngenxa yoko ukhetho oluchanekileyo lweziyobisi lubaluleke ngokukodwa. Ukuba ngaba kukuzala inzalo esosulelayo, njengosulelo lwebhaktiriya, usulelo lunokusonjululwa kwisiseko sengcambu ngokusebenzisa amayeza okulwa ne-antibacterial okanye i-antibiotics, kwaye ukukhula kweentsholongwane kungabulawa okanye kuthintelwe. Ngokwesiqhelo, ufumana usuleleko emva konyango, impendulo yokuvuvukala inokulawulwa ngokufanelekileyo. Ukuba kubangelwa zizinto ezingosuleliyo, sebenzisa amachiza athomalalisa ukosuleleka endaweni yoko, sebenzisa iziyobisi ezichasayo ukwenza izicwili ezonakeleyo ukufezekisa ukudumba kunye neempawu zokuthomalalisa iintlungu. Ngokuchasene noko, ukuba iyeza lisetyenziswa ngokungacwangciswanga, kulula ukuba iyeza alilunganga, kwaye iimpawu aziyi kunyanga unobangela. Nangona oko kubizwa ngokuba "ngamachiza alwa nokudumba" kuthathwa, kulula ukwenza ukubuyela umva kwaye imeko ayinakuba ngcono.
Ukongeza, ukusilela ukwenza umahluko ocacileyo phakathi kwezi ndidi zamachiza kukhokelele ekutshintsheni ngabom iziyobisi ze-antibacterial okanye zehomoni. "Ukuchasana nokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi" kunye "nokusetyenziswa gwenxa kwehomoni" sele zingxaki ezimbini ezibi kakhulu, kwaye nomonakalo owenzekileyo awunakuphetshwa. . Ukusetyenziswa kweziyobisi ze-antibacterial, nokuba kuqhelekile ukusetyenziswa okanye kuninzi kakhulu, kunokukhokelela kulungiso lwebhakteria. Ukonyuka kweengxaki kukhokelela ekusileleni kwonyango lwantlandlolo, kwaye kukhokelela kwiziphumo ezibi kakhulu ezinje ngeempendulo eziyityhefu kunye neempendulo ezingafunekiyo, ezonyusa idosi yamachiza kunye nomjikelo wamayeza, kwaye kude kufuneke ukuba kubuyiswe neziyobisi ezibiza kakhulu ezichasayo, ezibangela ilahleko kwezoqoqosho kunye nenkunkuma yeziyobisi; Kwangokunjalo, ukutshintshwa kwehomoni kunokuvelisa ukuxhomekeka kwiziyobisi, kunye nokusabela okungalunganga okunzulu, kwanokusongela ubomi.
Ngaphambili: Iyeza eligqibeleleyo lesifo seengcongconi
Okulandelayo: Ziziphi iziyobisi eziqhelekileyo?
abafowunelwa: nguBlacky Wong
I-ADD: No.575 iTiantong South Road, i-Yinzhou District, Ningbo, China
© 2020 Ungbo Feiyue Ukuthengisa Co.ltd. Onke amalungelo agciniwe.